Kuyambuka Kwemhuka kweIOS kunonoka; ichauya kubva Kubvumbi | IPhone nhau
Nintendo yainonoka kufunga kuvhura nharembozha, asi zvakangotora zita nehafu kuvhura kuti uone kuti zvinogona kubatsira sei. Kuvhurwa kwePokémon GO, mutambo uyo hofori yeJapan vhidhiyo yemutambo yakatangwa neNiantic, yakateverwa neSuper Mario Run iyo yakaita kuti vawane mari yakawanda, uye parizvino hapana vashoma vakamirira mbiri mbiri nyowani : vhezheni Moto Emblem nhare uye imwe ye Animal Crossing, protagonist weichi positi.
Nhasi, Chipiri, maererano The Verge, Nintendo akabvuma kuti iyo iOS vhezheni ye Animal Crossing ichauya mushure menguva yaitarisirwa, yaive pakutanga pakupera kwaKurume. Mutambo mutsva uye wakamirirwa kwenguva refu hausvike chero zvakadaro kusvikira gore rinotevera remari ratanga, rinozotanga muna Kubvumbi 2017 uye richapera munaKurume 2018. Kunonoka kwekutanga kweshanduro dzekutanga dzeIOS ye Animal Crossing uye Fire Emblem yaifanirwa kuna Nintendo yaida kutarisa kune yayo yekutanga nharembozha, inonzi Super Mario Run.
Kuyambuka Kwemhuka hakuzosvika kusvika munaApril
Nhau dzekunonoka kutsva idzi dzakapihwa mushumo weyekupedzisira mari yemari yeJapan vhidhiyo yemutambo hofori, uko kambani yakawana mambure purofiti ye € 530,42M uye € 1.400M mune mari. Izvo zvakanyanya kukosha kutengesa zvakawanikwa nemazita akadai saPokémon Sun uye Pokémon Mwedzi, maviri maNintendo 3DS mazita akawana kubudirira kusanganisa kwemamirioni gumi nemashanu emakopi, achiteverwa naSuper Mario Maker, zvakare kubva kuNintendo 15DS, iyo yakatengesa mamirioni maviri emakopi.
Mumakota eseyari havana kupa zviyero zvezvakawanikwa Super Mario Run, mutambo wakadzorwa mamirioni enguva uye waive nekutenga-kwakavakirwa € 9.99. Chikonzero nei vasina kupa zviyero zvemutambo wekutanga waMario kumhara paApp Store hazvizivikanwe, asi zvinopa fungidziro yekuti ivo vanoda kufukidza kugashira kwakangwara kupfuura kwaitarisirwa hofori yekuJapan. Is Super Mario Run inomhan'ara zvakare nekuda kwekunonoka kutsva kweMhuka?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Kuyambuka Kwemhuka kweIOS kunonoka; ichasvika kubva muna Kubvumbi
Aya ndiwo mashandiro eWatchOS 3.2 nyowani yeCinema Mode anoshanda